कल्पनामा हराइरहेका बेला छोरीको अर्को प्रश्नले म फेरि झसंग भएँ। म कसरी भनुँ उसको बाबा एउटा बलात्कारी हो, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी हो भनेर। तिमीलाई नाजायज भनेर नजन्मिँदै घरबाट निकालिदिने अपराधि हो भनेर।
‘मामु, मेरो बाबा खै?’ ६ वर्षीया छोरी आकृतिको अनपेक्षित प्रश्नले जोडसँग मेरो मुटुमा ठेस लागेको आभाष भयो। छोरीको प्रश्नले तरकारी काटिरहेको आफ्नो हात कतिखेर काट्यो त्यो पनि थाहा भएन।
‘मामु, बाबाको नाम के हो?’ आकृति एक तमासले प्रश्न सोधिरहेकी थिई। जबदेखि आकृतिले होस सम्हाली तबदेखि मैले उसलाई बाबा विदेश जानुभएको छ भनेर टारिरहेकी थिएँ। किनकि छोरीलाई यर्थाथ बताउने साहस ममा थिएन। न त ऊसँग मेरो कुरा बुझ्न सक्ने सामथ्र्य नै थियो।
त्यो कहाली लाग्दो विगत कसरी बिर्सन सक्छु र म!
जब विवाह पक्का भयो तब मेरो मनमा अनेकौं तर्कविर्तक खेल्न थाले। नयाँ घर र नयाँ परिवारको रहनसहन कस्तो होला? कसरी प्रस्तुत हुने? भनेर सोच्दा–सोच्दै विवाहको दिन आयो। विवाह भब्यताका साथ सम्पन्न भयो।
त्यसदिन नन्द साथीको बर्थडे पार्टी छ भनेर उतै बस्नेगरी गइन्। एक्लै बसेर कोठा सफा गर्दै थिएँ, अचानक कसैले ढोकाको घण्टी बजायो। ढोका खोलें। शोभित रहेछन्। म अचम्ममा परें। कहिले ६ बजेभन्दा अगाडि घर नआउने उनी त्यसदिन २ बजे नै आएका थिए। फेरि शुक्रबार पनि हैन। कतै बिसञ्चो त भएन?
‘आज किन छिटै घर आयौ, तिमीलाई ठिकै त छ नि?’ मैले सोधेँ। ऊ केही नबोली कोठातिर गयो। म उसको लागि चिया, खाजा बनाउन किचनतिर लागेँ। निकैबेर भइसक्दा पनि शोभित कोठाबाट निस्केन।
ढोकामा सासू–ससुरा उभिएका थिए। ‘के भयो शोभा तिमीलाई? के गति बनाएको यस्तो?’ एकैपटक तेर्सिएको प्रश्नले म झसंग भएँ।
सत्य कुरा भनूँ कि नभनूँ। सोच्दा–सोच्दै रोएर सबै घटनाको बेलिबिस्तार लगाएँ। मेरो कुरा सकिन नपाउँदै सासूको हात मेरो गालामा बजारियो। ‘तेरो यत्रो हिम्मत मेरो छोरालाई यस्तो दोष लगाउने?’ मैले त्यसपछि एक शब्द पनि बोलिन।
फेरि सोचें, कतै यो पेटको बच्चाले मेरो जीवनमा नयाँ रंग ल्याउँछ कि। तर अह! त्यस्तो केही भएन। मेरो कुराले कोही खुसी भएनन्। उल्टै ममाथि सबैले आरोप लगाए। ‘थाहा छैन कसको पाप पालेकी छे यसले’ सासूको तीखो वचनले मेरो मुटु छियाछिया भयो। न त शोभितले नै अपनायो आफ्नो बच्चालाई। एक जना ससुरा थिए जो मेरो पक्षमा बोल्थे। तर, तीन जनाको एउटै आवाज भएको त्यस घरमा मेरो र ससुराको कुरा कसले सुन्थ्यो र?
मलाई त्यो घरमा बस्न सकस भइरहेको थियो। माइती जाउँ किजस्तो लाग्यो। तर, बुबाआमासँग गएर पनि म के जवाफ दिन्थे र? त्यसैले ससुरासँग विदा मागेर घरका अरु कसैलाई केही नभनी म पेटभित्र भएको मेरो बच्चासँगै निस्केँ। ससुराले चाहेर पनि मलाई रोक्न सकेनन्।
हामीलाई हेर्न घरबाट ससुराबाहेक कोही आएनन्। म सोच्थें ढुंगाको मन भएका ती निदृयी परिवारमा यिनी एउटा भगवान कहाँबाट आइपुगे होलान्!
‘भन्स्यो न मामु मेरो बाबा कहिले आइसिन्छ?’ कल्पनामा हराइरहेका बेला छोरीको अर्को प्रश्नले म फेरि झसंग भएँ। म कसरी भनुँ उसको बाबा एउटा बलात्कारी हो, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी हो भनेर। तिमीलाई नाजायज भनेर नजन्मिँदै घरबाट निकालिदिने अपराधि हो भनेर।
प्रकाशित: September 28, 2019 | 18:54:29 असोज ११, २०७६, शनिबार